Iindaba - Iinkcukacha zenkqubo yokunyathela
Iinkcukacha zenkqubo yokunyathela
Inkqubo yokunyathela yindlela yokulungisa isinyithi. Isekwe kwisiphene seplastiki. Isebenzisa izixhobo zokufa kunye nezokunyathela ukwenza uxinzelelo kwiphepha ukuba lenze iphepha ukuvelisa ukusilela kweplastiki okanye ukwahlukana, ukuze kufunyanwe iinxalenye (zokunyathela iinxalenye) ezinemilo ethile, ubungakanani kunye nokusebenza. Logama nje siqinisekisa ukuba zonke iinkcukacha zenkqubo yokunyathela kufuneka ziqwalaselwe endaweni, ukuqhubekeka kunokwenziwa ngokufanelekileyo. Ngelixa uphucula ukusebenza ngokukuko, inokuqinisekisa nangokulawulwa kweemveliso ezigqityiweyo.
Iinkcukacha zenkqubo yokunyathela zingoku kulandelayo:
1. Phambi kokunyathela, kufuneka kubekho amanyathelo enkqubo yokulungelelanisa ipleyiti okanye isixhobo sokulungisa esizenzekelayo ukuqinisekisa ukuba izinto ezingafunekiyo zingena kwisisu ngokugudileyo.
2. Indawo yokuma kwebhanti kwinto yokondla iya kuchazwa ngokucacileyo, kwaye umsantsa wobubanzi kumacala omabini ebhande lezinto nakumacala omabini ekliphu yokutyisa uya kuchazwa ngokucacileyo kwaye uzalisekiswe.
3. Nokuba ukungqisha inkunkuma kususwa ngexesha elifanelekileyo nangempumelelo ngaphandle kokuxubeka okanye ukunamathela kwimveliso.
4. Izixhobo kwicala lobubanzi bekhoyili ziya kubekwa esweni nge-100% ukukhusela iimveliso ezingafunekiyo ezibangelwa zizinto ezingonelanga.
5. Nokuba kugqityiwe na ukuphela kwekhoyili. Xa iikhoyili ifikelela entloko, inkqubo yokunyathela iya kuyeka ngokuzenzekelayo.
6. Umyalelo wokusebenza uya kuchaza ngokucacileyo indlela yokusabela yemveliso eseleyo ekubunjeni kwimeko yokuvalwa okungaqhelekanga.
7. Phambi kokuba ibhanti ephathekayo ingene ekubumbeni, kufuneka kubekho impazamo ebonakalisa izixhobo ukuze kuqinisekiswe ukuba izinto ezingafunekiyo zinokungena ngokuchanekileyo ngaphakathi ekubumbeni.
9. Ukufa okunyathela kufuneka kuxhotyiswe ngomtshini wokujonga ukuba imveliso iyabambeka na kumngxunya wokufa. Ukuba incamathele, izixhobo ziya kuyeka ngokuzenzekelayo.
10. Nokuba zibekwe esweni na iinkqubo zokunyathela. Xa kuvela iiparameter ezingaqhelekanga, iimveliso eziveliswa phantsi kwale parameter ziya kukhutshwa ngokuzenzekelayo.
11. Nokuba ulawulo lwe-stamp die lusebenza ngokufanelekileyo (isicwangciso kunye nokuphunyezwa kokugcinwa kokuthintelwa, ukuhlolwa kwendawo kunye nokuqinisekiswa kweendawo zokugcina izinto)
12. Umpu womoya osetyenziselwa ukuvuthela inkunkuma kufuneka uchaze ngokucacileyo indawo ekuvuthelwa kuyo kunye nendlela eya kuyo.
13. Akuyi kubakho bungozi kumonakalo wemveliso ngexesha lokuqokelelwa kweemveliso ezigqityiweyo.
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Izahlulo Ihowuliseyili, Iimveliso zeSitayile seSinyithi, Ukulahlwa kweMagnesium, Aluminium Cnc ngomshini Iintetho, Izikrufu, Plate Intwasahlobo, Zonke iiMveliso